Valan-javamaniry ao Shanghai
Shijuzhuang Industry Park
Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co, Ltd dia iray amin'ny mpamokatra pumping matihanina be indrindra, manampahaizana manokana momba ny fikarohana sy ny famolavolana, famokarana & ny varotra fantsom-bidy avo lenta, rafitra famatsiana rano ary rafitra fanaraha-maso ny pump. Izy io dia mitarika ny indostrian'ny famokarana pump any China. Mihoatra ny 5000 ny mpiasa ao aminy, izay misy 80% mahery ny manana diplaoma eny amin'ny oniversite, injeniera 750, injeniera zokiolona ary mpitsabo. Ny vondrona KAIQUAN dia manana toeram-piompiana indostria 5 any Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning ary Anhui izay misy faritra 7000 000 metatra toradroa.
Raha ny filazan'ny varotra, Shanghai Kaiquan dia nahazo laharana faha -1 nandritra ny 15 taona nifanesy tao amin'ny indostrian'ny paompy Sina ary tamin'ny taona 2019 dia 850 tapitrisa dolara ny varotra an'ny tarika. Noho ny fanampian'ny rafitra ERP & CRM, ny KAIQUAN dia manome vahaolana matihanina ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny tsenan'ny mpanara-maso. Ankoatra izany, KAIQUAN dia nametraka tambajotra serivisy serivisy ho an'ny orinasa 32 izay sampana mpivarotra sy maso ivoho 361. Ny famokarana vokatra mifaninana sy azo antoka ho an'ny mpanjifa mahafa-po no laharam-pahamehana an'i Kaiquan.
Vokatra lehibe: Fitetezana tampon-kafatra, paompy mihetsika mitsangatsangana, Vakiteny mihetsika mikopoka mikotrika, rano fantsom-bazaha boiler, paompy vovoka rano, paompy vakin-drano, paompy vohitra mihintsan-drano, paompy fanamafisam-bidy, tontolon'ny fanaraha-maso & rafitra, paompy rano mientina, Pumpes hoentina, karazana pump rehetra ampiasaina indostrian'ny angovo nokleary.
Address: No. 4255, lalana Caoan, Distrika Jiading, Shanghai, China
(Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina matihanina amin'ny motera milefitra ary ny paompy herinaratra azo avy amin'ny fanjakana dia an'ny fanjakana nasionaly any Shina).
Tamin'ny taona 2008 dia nividy ny Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co, Ltd ny Kaiquan Group ary nanova ny anarany ho Hefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Mahafatatra ny velarana 270,000 metatra toradroa sy faritra amoron-tanany 230,000 metatra toradroa ho an'ny famokarana. . Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 1500 mahery izay misy injeniera 278 sy injeniera senior 56. Misy ny fanandramana mandroso, ny fisafoana ary ny famolavolana ireo motera sy paompy azo ampiasaina eto.
Vokatra lehibe: Zotram-pivarin-drano, paompy azo atsofoka, paompy vilany, paompy miady amin'ny afo, paompy mihena alaina, paompy mihetsika azo afangaro, rafi-panamboarana Submersible, takelaka fanaraha-maso, pump secteur pump, pump stage pump sy ny sisa.
Address: 611, Lalana Tianshui, Distrika Hefei Xinzhan, tanàna Hefei, Faritanin'i Anhui, Sina
Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2005 niaraka tamin'ny famatsiam-bola 20 tapitrisa USD, izay mahatratra 47,000 metatra toradroa sy faritra fananganana manodidina ny 22000 metatra toradroa. Amin'izao fotoana izao, manana manam-pahaizana 250, teknisiana injeniera zokiolona ary mpiasa mahay. Misy ny tsipika famokarana resin-tsaina manerantany sy ny fangaro mitohy. Ny fanao rehetra dia mandray ny fanamboarana fasika miteraka fasika ary manana fatana fandefasana haingam-pandeha 2-ton & 1-taonany izy ireo izay afaka manary singa mitambatra 8 taonina. Ankoatr'izay, manana 300 andrana fitaovana mandroso izy io.
Vokatra lehibe: Ireo karazana pump slurry ampiasaina ho an'ny Minging, Coal production, Power plant, Renirano rano, Alumina ary indostria hafa.
Address: Faritra sahan'ny faritany ZHENGDING, Faritanin'i Hebei, Sina
Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd dia orinasa iray an'ny orinasa KAIQUAN Group izay mitotaly faritra 34 000 metatra toradroa sy velarana 12000 metatra toradroa. Mpikambana 630 amin'izao fotoana izao izay misy injeniera senior miisa 63. Misy milina 200 manangana milina mandroso toy ny fitaovana milina NC, fitaovana milina midadasika, milina mahay mandanjalanja hafainganam-pandeha, tsy fitaovana manimba fanodinana automatique tsy manimba.
Shengyang Kaiquan dia manana ny fitaovana famokarana sy ny fitiliana tonga lafatra, ny mpiasan'ny mpitantana tena tsara, ny fitantanana sy ny fikarakarana hentitra izay miorina amin'ny paikady sy antontan-taratasy momba ny rafitra iraisam-pirenena IS09001, manome antoka fa hanome vokatra tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.
Vokatra lehibe: API610 Pump pump process dia mahafeno ny fepetra takian'ny API6107 ANSI B73.1M sy IS02858
Address: 4, 26faha Lalana, Distrika Shenyang ET, tanàna Shenyang, Faritanin'i Liaoning, Sina
Zhejiang Kaiquan Industrial Park dia naorina tamin'ny volana septambra 1968 ary novana anarana hoe Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. tamin'ny Mey 1994. Mahatratra 50.000 metatra tora-droa sy velaran'ny fananganana 23678 metatra toradroa ao Zhejiang. Ankehitriny dia manana mpiasan'ny mpiasa 490 ary fitaovana 213 fanodinana fanodinana & fitiliana miaraka amin'ny famokarana isan-taona farafara maherin'ny 100.000 miaraka amin'ny sandan'ny famokarana herinaratra 35 tapitrisa dolara isan-taona.
Vokatra lehibe: Paompy iray miendrika, pump inline, Fomba enta famarana
Address: Faritra Indostria Atsinanana Atsinanana, Faritr'i Yongjia, Tanànan'i Wenzhou, Faritanin'i Zhejiang, Sina